Debian6ထည့်သွင်းမှုအဆင့်ဆင့် | Linux မှ
Debian6တပ်ဆင်ခြင်းအဆင့်ဆင့်
ဒီအခွင့်အလမ်းမှာငါတို့ဘယ်လို install ရမလဲဆိုတာမြင်ရလိမ့်မယ် Linux Debian ၆။ ကျနော်တို့ယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်အနည်းငယ်နှင့်အတူစတင်, ငါတို့ငါတို့ဖို့စတင်ပါလိမ့်မယ် တပ်ဆင် တစ်ခုချင်းစီကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်မြင်စေရန်အတွက်ဖန်သားပြင်များပါ ၀ င်သောဤကြီးစွာသော distro ၏ Paso.
Dany Rey သည်တစ် ဦး ဖြစ်သည် အနိုင်ရသူ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပတ်စဉ်ယှဉ်ပြိုင်မှု၏: «Linux အကြောင်းသင်သိသမျှကိုမျှဝေပါ«။ ဂုဏ်ယူပါတယ်! အကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန် ပါဝင်ဆောင်ရွက် နှင့်ရပ်ရွာသို့သင်၏အလှူငွေပါစေ, ဒန်နီပြုသကဲ့သို့?
တရားဝင်ဝီကီအရ Debian Linux သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိစေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ထောင်ကျော်ကတီထွင်ခဲ့သောအခမဲ့လည်ပတ်ရေးစနစ်ဖြစ်ပြီးအင်တာနက်မှတဆင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည်။
Debian ၏အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၊ ၄ င်း၏စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခြေပြု၊ စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောသဘောသဘာဝနှင့်ပွင့်လင်းသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပုံစံသည်၎င်းကိုအခြား GNU operating system နှင့်ခွဲခြားသည်။ ဤအရာအလုံးစုံရှုထောင့်များနှင့်ပို။ ခေါ်ဆိုခအတွက်စုဆောင်းနေကြသည် Debian လူမှုရေးစာချုပ်.
၎င်းကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် Linux ကို kernel တစ်ခုအနေဖြင့် အသုံးပြု၍ GNU system ကိုဖန်တီးရန်စိတ်ကူးဖြင့်မွေးဖွားခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်ယနေ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်တာ ၀ န်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော Debian စီမံကိန်းသည်အခြား kernels (Debian GNU / Hurd, Debian GNU / NetBSD နှင့် Debian GNU / kFreeBSD) ကို အခြေခံ၍ GNU စနစ်များကိုတီထွင်သည်။
၎င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုမှာအခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအားအခမဲ့မဟုတ်သောဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်ဗားရှင်းများခွဲရန်ဖြစ်သည်။ အခြား distros များနှင့်မတူဘဲ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပုံစံသည်ကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ၎င်းသည်စီးပွားဖြစ်လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ သုံးစွဲသူများကိုယ်တိုင်တီထွင်သည်။ Debian သည်၎င်း၏ software ကိုတိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းမပြုပါ။ ၎င်းသည်လိုင်စင်ကိုလေးစားသရွေ့၎င်းဆော့ဖ်ဝဲအားတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားစီးပွားဖြစ်ဖြန့်ဖြူးခွင့်ပြုသော်လည်း၎င်းသည်အင်တာနက်ပေါ်ရှိမည်သူမဆို၎င်းကိုပြုလုပ်ပေးသည်။
Debian Linux ကို DVD, CD, Blu-Ray, USB ချောင်းများနှင့် floppy disk စသည့်အမျိုးမျိုးသော installation ယန္တရားများကို သုံး၍ တပ်ဆင်နိုင်သည်။
web ကို: http://www.debian.org/
Debian GNU / Linux ကို download လုပ်ပါ
ထည့်သွင်းပုံ၏အဆင့်ဆင့်ပုံများ + ရှင်းလင်းချက်အကျဉ်း။
ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမဆုံး boot တက်လာသောအခါမြင်ရလိမ့်မည်။ Grphical Install ကိုရွေးချယ်ပါ
ပြီးခဲ့သည့်အဆင့်တွင်အသုံးပြုသူအတွက် pass .. အသုံးပြုသူသည် admin မဟုတ်ပါ
ဤအဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် hdd ကိုပြင်ဆင်ပေးသည်၊ installer အားမည်သည့်အခန်းကန့်အမျိုးအစားကိုဆိုလိုသည်ကိုဖော်ပြပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေဘုယျအားဖြင့် virtual disk တစ်ခုတွင်ရှိနေသောကြောင့် disk တစ်ခုလုံး၏ option ကိုပေးသည်။ သို့သော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစက်တွင်ရှိနေလျှင် manual ကိုရွေးချယ်ပြီးနေရာလွတ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ယခင်ဖန်တီးထားသည် ...
disk ကို partition လုပ်ရန်ရွေးချယ်သည်။
အခြားရွေးချယ်စရာများမှာအတွေ့အကြုံများစွာရှိသောသုံးစွဲသူများအတွက် ဖြစ်၍ ပထမရွေးစရာကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးသည်။
ဒီဖန်သားပြင်တွင် disk သို့ပြောင်းလဲမှုများရေးသားခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုတော့မည်ဖြစ်သည် ((98/99 hehehe အတွင်းနှစ်များအတွင်း Linux ၌ကျွန်ုပ်စတင်ခဲ့သည့်အခါကျွန်ုပ်အရာအားလုံးမည်မျှဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ကိုသင်သိသည်)
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်သော linux စီမံခန့်ခွဲသူများဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးချယ်ထားသည့်ရွေးချယ်စရာများအတွက်သေချာသည်
ကျွန်ုပ်တို့ကရွေးစရာမလိုဘဲ ဆက်လက်၍ ... (ဘယ်ဘက်တွင်နည်းသည်)
ဤဖန်သားပြင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုရွေးချယ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည် mail server၊ ftp, print, ssh စသဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Samba အတွက်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အမည် (ဖိုင်ဝေမျှခြင်း)
Grub (linux bootloader) ကို disk ထဲရေးချင်ပါသလား။ ဟုတ်တယ်လို့ပြောတယ်
ငါတို့လုပ်ခဲ့တယ် !!!!! installation ပြီးသွားပြီ !!
ငါတို့သည်ငါတို့၏ချစ်လှစွာသော GRUB ကြည့်ပါ ...
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Dany Rey!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Debian6တပ်ဆင်ခြင်းအဆင့်ဆင့်
Orlando တွင် hernandez ဟုသူကပြောသည်
ဆန်တီယာဂို၊ ခင်ဗျား၊ ပရိုဂရမ်ထည့်သွင်းရန် ၀ င်းဒိုးထွက်လာသောအချိန်တွင်သင်သည်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းပတ် ၀ န်းကျင်ရွေးစရာကိုမစစ်ဆေးခဲ့ပါ၊ သို့သော်ကမ္ဘာပေါ်တွင်သင် desktop တစ်ခုတင်ရန်သာလိုအပ်သည်မဟုတ်ပါ။ မင်းရဲ့ pc ကိုစလိုက်တာနဲ့ terminal တစ်ခုအဆုံးသတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်супер user တစ်ယောက်အနေနဲ့ log in လုပ်ရမှာပါ။
စကားဝှက်ထို့နောက်သင်အဲဒီမှာလုပ်လိမ့်မည် # ရှိသင်္ကေတရပါလိမ့်မယ်;
# apt-get install (သင့်အကြိုက်ဆုံး desktop) ကို install လုပ်ပြီးသည်အထိစောင့်ပါ
Luis Alexis Fabris ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ d4ny လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကမှသင်လက်စွဲသင်ခန်းစာအရ Debian6ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ပြီးပါက၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကြိုးမဲ့ကဒ်အတွက် driver များထည့်သွင်းလိုသောအခါကျွန်ုပ်တွင်ပြaနာတစ်ခုရှိသည်။
Luis Alexis Fabris ကိုပြန်ပြောပါ
အားလုံးမင်္ဂလာပါ တပ်ဆင်ပြီးသည့်နောက်၊ ကျွန်ုပ် Reboot လုပ်သောအခါ Debian သည် graphical boot မလုပ်ပါ။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ?
Emanuel Jorge Malfatti ဟုသူကပြောသည်
အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤနေရာနှင့်ကျွန်ုပ်ပထမဆုံးဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါသံသယကြောင့်ငါမေးတယ်။ ဘယ် Debian အမျိုးအစားကိုသင်အကြံပြုသလဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတည်ငြိမ်ပြီးနောက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုစသည်တို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုငါဖတ်ပြီးပြီ။ အဲဒါကငါ့အတွက်ရှုပ်ထွေးမှုများစွာဖြစ်စေခဲ့တယ်။ ၎င်းကိုကူးယူရန်ကြိုးစားသောအခါ၊ ၎င်းသည် dvd 1, dvd2, dvd3: or cd1, cd2 ... နှင့်အမှန်တရားဆိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာကိုနှင့်မည်သည့်အရာကို download ပြုလုပ်သင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်လုံးဝနားမလည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုသတိပြုပါ။ ငါလေ့လာသူပေါ့။ သင်၏အချိန်အတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ !!!
PS: ငါ Ubuntu ကလာတာ။ ယခုအချိန်တွင်ငါ Linux Mint 14 မှရေးသည်။ Ubuntu ကိုငါမကြိုက်တော့၊ ကြိုးစားသင့်သည်။ ယခုငါ Debian ကို အခြေခံ၍ Mepis နှင့် Linux Mint ကိုကူးယူနေသည်။
Emanuel Jorge Malfatti အားစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ။ Debian 7.2 ကိုကျွန်တော် install လုပ်နေတယ်။ grub ကို install လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် grub ကိုမတပ်ဆင်နိုင်ဘူးဆိုတာအမှားတစ်ခုချမိပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ LILO ကို install လုပ်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်လည်းအမှားတစ်ခုပေးခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်သွားလဲ။ - မှတ်ချက် - ငါသည် debbian ကို virtualbox မှ install လုပ်နေသည်။ -2 မှတ်ချက် - ကျွန်ုပ် install လုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည့် debian သည် .iso တွင် debian ပါသော GNOME နှင့်အတူပါလာသည်။
linux debian 7.5.0 ကို install လုပ်ပြီးသောအခါသူသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ 7.6.0 တောင်မှ၎င်းသည် boot မတွေ့ပါဟုကျွန်ုပ်အားမပြောပါ
အလွန်တရာကောင်းတယ်၊ linux ဒေါင်းလုပ်မကြာမီပြီးသွားလိမ့်မယ်။ ငါနောက်ပိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့ link ကိုသိမ်းဆည်းပါ။ သင်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ သိုလှောင်ရုံများနှင့်ဆက်စပ်သောတစ်ခုခုရှိပါသလား။
ကျွန်ုပ်အား debian 6.0.6 ၌လေ့လာသူအဖြစ်ကျွန်ုပ်ပြောရမည်။ ကျွန်ုပ်စက်၏ Ethernet နှင့် wifi port သည်အလိုအလျောက်သက်ဝင်မှုမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် downloads များကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပရိုဂရမ်အသစ်များတပ်ဆင်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိူင်သည်။ အဲ့ဒါနဲ့လား
Debian သည်မူလ Desktop Environment အဖြစ် Gnome သို့ပြန်သွားသလား။